Rosia · Oktobra, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Rosia · Oktobra, 2015
Tantara mikasika ny Rosia tamin'ny Oktobra, 2015
Lisitry ny Habaka Voaràra ao Okraina: Fepetram-Piarovana Sa Fitaovam-Panivanana?
Okraina 25 Oktobra 2015
Milaza ny polisin'ny aterineto vaovao ao Okraina fa hiaro ny Okraniana amin'ny aterineto no tanjony, saingy miteraka ahiahy eo amin'ireo mpiserasera ny lisitra misy ireo habaka voaràra ao Okraina fa hisy fiantraikany amin'ny fahalalaham-pitenenana.
Manao Hetsi-panoherana Amin'ny Fisian'ireo Toby Miaramila Ao Anatin'ny Sisintaniny ireo Bielorosiana
Belarosia 22 Oktobra 2015
Miaraka amin'ireo hetsika mafy miisa 500 any Minsk renivohitra, sy hetsika bebe kokoa ao amin'ny media sosialy, mamoaka ny heviny manohitra ilay vinavinanà tobim-pamaharan'ny tafika an-habakabaka Rosiana hatao eo amin'ny tany Bielorosiana ireo Bielorosiana.
Hehy 20 Oktobra 2015
Fifandraisana iraisam-pirenena 15 Oktobra 2015
Fahalalahàna miteny 13 Oktobra 2015
Netizen Report: Manjohy ny Làlan'i Rosia i Shina, Mitàna Ireo Angon-drakitr'ireo Mpampiasa Ho Eo An-tànan'ny Governemanta
Shina 12 Oktobra 2015
Ny herinandron'ny 24 Septambra, nandefa ireo mpanao lalàna Indiana ho eny amin'ny fanaovana kisarisary ny hatezerana naterak'ilay volavolan-dalàna momba ny fanasiana fanafenana. Eo ankilany, mamerina mamikotra ny fahefana eo aminy ireo mpitondra Iraniana amin'ny alàlan'ilay Filankevitra An-tampon'ny Seraseran'ny Aterineto ao amin'ny firenena.
Etazonia 11 Oktobra 2015
Fahalalahàna miteny 08 Oktobra 2015
Niverina indray ny fanasaritahan'ny governemanta rosiana ny Wikipedia
Fanampenam-bava 08 Oktobra 2015
Herinandro alohan'ny lazaina ho fandarohan'ny Rosiana an'habakabaka ao Syria, dia nanomboka nitohy mahazatra indray ny asa tao amin'ny Wikipedia nataon'ny @RuGovEdits amin'ny fampiasana olona mampiasa adiresy IP an'ny governemanta rosiana